China FOTON U12D orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Foton
Ny mpanazatra Foton 12m dia ny fanehoana kalitao, fiarovana, fahamendrehana, fahombiazana avo lenta, fikarakarana ny takian'ny tsena amin'ny toetrany matanjaka sy ny fiatraikany amin'ny fahitana.
Refy ankapobeny 12000 * 2550 * 3790
Fahaiza-mipetraka 32 + 1 + 1/1 + 1 + 1
Firafitry ny vatana Monocoque / Semi-monocoque
Fisehoana tampony endrika rindrina miendrika satro-boninahitra: famolavolana kanto sy kanto, maneho ny fihetsika mendri-kaja; Rindrina ambony: misy zoro caster 50 degre ho an'ny fanoherana ny rivotra ambany, manan-danja amin'ny fitsitsiana angovo; Rindrina lafiny: endrika mirindra miaraka amina endri-javatra mavitrika sy fohy.
Ny bus Foton dia mandalo ny fitiliana fiara mafy sy ny fitsapana rollover mihoatra ny 100000 kilometatra amin'ny toetoetran'ny karazana lalana sy ny toetr'andro mafy indrindra toy ny mari-pana avo, ny mari-pana ambany na ny tsindry ambany.
Foton dia manana tsipika nomerika nasionaly ho an'ny nomerika, zana-pandrefesana haingam-pandeha, fandriana andrana sisiny, enta-mavesatra, farafara fitiliana ABS, rafi-pitiliana fitsapana vakira ary ny hafa, Fiantohana ny fanamarinana sy ny fankatoavana avy amin'ny TUV Rheinland Alemanina sy ny laboratoara nasionalin'ny CNAS.
Miaraka amin'ny firafitra matanjaka, ny bus Foton dia mahatohitra ny fifandonana eo an-tampony sy eo an-dohany ary koa manakana ny fidoboky ny sisiny. Alohan'ny hidirany amin'ny serivisy dia iharan'ny fitsapana sy fanamarinana henjana izy ireo.